Zo fototry fa tsy maintsy atao mifanaraka amin’ny Lalana anefa izany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fahalalahana ny fahafahana maneho hevitra
Zo fototry fa tsy maintsy atao mifanaraka amin’ny Lalana anefa izany
Haja il y a 2 mois
Nametraka paik’ady hisorohana ny mety hisian’ny korontana ny mpitandro filaminana iombonan’ny Tafika sy ny zandary ary ny Polisim-pirenena(EMOFAR,EMOREG). Nisy ny fivoriana niarahan’izy ireo teny amin’ny tobin’ny Zandary Tsaramandroso eto Fianarantsoa ny alarobia 10 Febroary 2021 lasa teo. Nitarika azy ny Jeneraly Tsiketa Bernard Kaomandin’ny Zandarimaria na ny CIRGN (Circonscription de la Gendarmerie Nationale) Fianarantsoa.
Manampy ny mpitandro filaminana amin’ny asany ny fisian’ny loharanom-baovao samihafa. Tafiditra ao ny avy amin’ny sampan-draharaha mpiandraikitra izany ao anatin’ny EMOFAR. Manoloana ireo vaovao miely eto amin’ny firenena ary dia isan’ny niompanan’ny dinika ny fandaminana ny fifanakalozana loharanom-baovao sy ny fandrindrana izany eo amin’ny samy mpitandro filaminana mba tsy hampisavorovoro ny vahoaka. Jerena akaiky ihany koa ny fanaraha-maso ny fivoaran’ny filaminana eto Fianarantsoa izay mbola tsy dia ahitana hetsika toy izay misy any Antananarivo hoy ny Jeneraly TSIKETA Bernard. Nisy fihenana tokoa manko ny asan-dahalo tamin’ireo Distrika sasany tato anatin’ny Faritra Matsiatra Ambony tamin’iny taona 2020 iny raha ny fahafantarana azy ka tohizina ny ezaka mba ho an’ny fandriampahalemana maharitra. Tsy vitan’izany fa hamafisina ny fampanjakana ny filaminana eto an-tananan’I Fianarantsoa eo anatrehan’ny asan-jiolahy sy ny herisetra mamoafady isan-karazany. Noho izany hentitra ny mpitandro filaminana raha misy tranga mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka ary misoroka ny tsy hisian’ny korontana satria matetika ao anatin’izany no anararaotan’ny sasany mandika ny lalana. Afaka maneho hevitra anefa ny olom-pirenena tsirairay saingy tsy maintsy atao anatin’ny fanarahan-dalana izany hoe tokony mangataka fahazoan-dalana amin’ny tompon’andraikitra isan’ambarantongany. Na izany aza nambaran’ny jeneraly hatrany fa anjara asan’izireo ny miaro ny vahoaka sy ny fananany ary ny andrim-panjakana ny amin’izay mety ho fanararaotana raha toa ka misy ny hetsika fanehoan-kevitra.
Niaiky ny Kaomandin’ny Zandary Tsaramandroso fa tsy mora ny asa miandry azy ireo ary nanamafy izany izy tamin’ny lanonam-pahatsiarovana ny faha 46 taona nahafatesan’ny Kolonely Ratsimandrava Richard ny 11Febroary 2021. Velirano efa natao ny fanatanterahana ny asa ho mpitandro ny filaminana ka tsy mihemotra amin’ny adidy efa noraisina izahay na dia hihatra aman’aina aza. Efa nolovainay tamin’ny Kolonely Ratsimandrava Richard izany satria ho azy efa fantany mialoha ny hanjo anefa tsy niamboho adidy izy tamin’ny nanoloran’ny Jeneraly Ramanantsoa Gabriel ny fahefana taminy ny 5 Febroary 1975 hoy ny jeneraly Tsiketa Bernard. Antony koa io nanaovana ny datin’ny 11 febroary ahatsiarovana manonkana ireo mpitandro filaminana,Tafika sy Zandary ary Polisy lavo teo am-panatanterahana ny asany. Miisa 2 ny Zandary namoy ny ainy amperin’asa ny taona 2020 teto Fianarantsoa. Lohahevitra nosafidiana ho an’ny fahatsiarovana azy ireo ny teny nalaina tao amin’ny Soretra Masina hoe: “Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany” Genesisy 4:10b.
Iza moa ny Kolonely Ratsimandrava Richard?
Ny Kolonely Ratsimandrava Richard,teraka ny 21 Martsa 1931 tao Antananarivo. Niala teto Madagasikara ka nanohy ny fianarana ambony tany Frantsa taorian’ny fianarana nataony teto an-tanindrazana. Niofana tao amin’ny sekoly miaramila Frantsay Saint Cyr ary niasa tamin’ny tafika Frantsay izy nandritra ny iraka nataony tany Maroc sy Algerie. Nanambady an-dRamatoa Therese Ratsimandrava tamin’ny taona 1956 ary niteraka dimy vavy. Voatendry hiasa teto Fianarantsoa izy hiandraikitra ny 12 em Bataillon d’Infanterie de Marine ny taona 1959 mbola tao anatin’ny tafika Frantsay tamin’izany fotoana izany. Taorian’ny nahazoana ny fahaleovantena dia niasa tamin’ny tafika an-tanety hatramin’ny taona 1962.Voatendry ho Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena ny 02 Aprily 1969 ary izy no manamboninahitra Malagasy voalohany nibaiko ny zandarimariam-pirenena. Minisitry ny Atitany tamin’ny Governemanta Ramanantsoa tamin’ny taona 1972. Nandray ny fahefana feno amin’ny maha filoham-panjakana ny 05 Febroary 1975 rehefa natolotry Jeneraly Ramanantsoa Gabriel azy ny fitondrana. Enina andro monja taorian’io izany hoe ny 11 Febroary 1975 dia maty voatifitra teo Ambohijatovo Ambony Antananarivo izy niaraka tamin’ny manamboninahitra lefitra roalahy mpiambina azy.
Energies renouvelables : La MCB et l’AFD signent le démarrage des lignes de crédit SUNREF à Madagascar - il y a 20 heures